September 1, 2010 by dalabyo 14 Comments
GetText dhigaysa turjumaad sahlan
Tani version cusub oo uu leeyahay laba isbedel waaweyn iyo waxyaalo badan oo Ciidamada Kumandoska kutaan ka mid ah.
Isbedelka ugu muhiimsan ee is-dhexgalka bulshada reer plugin ku leh nidaamka WordPress GetText ah, taas oo ah habka ugu WordPress (iyo qaar ka mid ah mawaadiicda iyo plugins) bixiyaan qoraalkii ka kooban isu of. Tan waxa lagu sameeyaa laba files (loo yaqaan .po / .mo files sababtoo ah kordhintaa ay) oo ay ku jiraan liiska Xariga turjumay in software in ka mid ah.
Maxaa Transposh hadda ma yahay inay isticmaalaan ayaa sheegay in files, sidaas darteed haddii aad leedahay files in turjumi WordPress si Isbaanish, waxay qaadan doontaa mudnaansho iyo Transposh isticmaali doonaa files si uu u sameeyo turjumaad ah ee Qadaadka iyo si Isbaanish. Maxay tani ka wanaagsan? waxaa jira sababo dhowr, mid waa in mararka qaarkood u saamaxaaya translations halkaas oo ay hore ugu jiray aan macquul ahayn, kale waa in tarjumaadda ku salaysan aadanaha iyo arko more sax, iyo kan ugu dambeeya waa in nadiifi karaan madmadowga gaar ahaan Xariga gaaban sida magacyada bisha iyo maalinta soo gaabiyey.
Sidee ku heli .po / files .mo, iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida shaqo this waxaa laga heli karaa http://trac.transposh.org/wiki/UsingGetText.
Habkaani waxa kale oo ka mid ah binaynaa sheeko ah nidaamka ee-xasuusta isagu qudhiisu ka mid ah plugin ku, taas oo ay hadda taageertaa xcache iyo eaccelarator marka lagu daro nuquladii hore Beebee taageero. Version Tani waxay isticmaashaa wakiilnimo a more isafgaradka xogta fiicnaado waxqabadka iyo in la yareeyo isticmaalka xasuusta.
Ciidamada Kumandoska More in this version:
Tags laga soo daruur tag doono hadda lagu tarjumi leh tiro turjumi
Fix for dhuu-ka “ma ansax header plugin” Arrinta, haddii aad ka heli “Default” qoran laba jeer ee aad goobaha doorashada widget, fadlan delete file widgets / tpw_deafult.php ah
Fix for MS turjumi u janjeedhaan in ay dar boos dheeraad ah si ay natiijo turjumaad
Kutaan go'an liis leh widget calamada CSS ka hortagga aragtida calamada
Waxaan sidoo kale khariidad site is beddeleen xoogaa si aad u arki karto feed horumarinta iyo wax ka beddelka waqtiga fashion a more dhab.
Sugitaanka jawaabcelinyo aad on version this.
Update: Kutaan A ayaa laga war helay markii la isticmaalayo plugin oo aan isagu qudhiisu ka, haddii aad leedahay tarjumadood ee ku celiyaan, ama ma aad arki karto tarjumadood ee hore loo sameeyey, fadlan dib plugin ka soo wordpress.org, plugin hadda waxa waxaa jira go'an. Thanks Nicholas warbixinta this.
Filed Under: Messages General Tagged Iyadoo: Beebee, Bing (msn) turjumaan, bugfix, eaccelarator, gettext, yaryar, sii daayo, plugin wordpress, xcache
Arle Uein sheegay
Waxaan leeyahay cayayaanka cusub la sii daayo cusub (0.6.3) iyo Mailpress plugin ah. Marka waxaan rabnaa in aan soo bandhigo mid ka mid ah tarjumaadaha ee bogga, waxaa jira qalad :
Digniin: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: fariin qalad Unregistered ee Hay'adda, line: 4 in /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php on line 7
Digniin: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: PCDATA qiimaha baadil Char 1 ee Hay'adda, line: 4 in /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php on line 7
Digniin: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: PCDATA qiimaha baadil Char 3 ee Hay'adda, line: 4 in /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php on line 7
Digniin: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: xigxiga ']]>’ Lama oggola in wax content ee Hay'adda, line: 4 in /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php on line 7
Digniin: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: content errorExtra gudaha dhamaadka document ee Hay'adda, line: 4 in /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php on line 7
Qalad Fatal: Wac si aad ah hasAttributes function xubin() on a non-shay ee /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php on line 50
Waxaan ku rakiban plugin oo ma uu arki karin colaadda, Waxaan u maleynayaa in lay maqan wax meel.
Dagaalka waxaa keena jidka Transposh isticmaalo si uu dhex galaan gettext by (by ku daray laqeexay kuwa ka dibna iyaga ka saareen) sida caadiga ah colaadda aad tilmaamay waa in aysan dhicin.
Waxaad ku dari kartaa fursad “gab isdhexgalka gettext” …
Haa, Garo waan ku dari doonaa in version soo socda
Edward Mugits sheegay
Waan jeclahay waxa i arkaysaan oo halkan ka akhriso, kaliya ma farsamo ahaan awoodin in ay fuliso. Helitaanka diyaar u ah inay leeyihiin site qaxwaha aan updated si WP dambeeyay oo fur-in this turjumaad waa waajib ii. Marka turjumay, waxaa casriyeyn doono iyo dad bogga sidii isagoo ah page gaar ah? Haddii aan heli lahaa 20 pages ee Ingiriisiga iyo turjumay Japanese, i awoodi doonaan in ay isticmaalaan bogga turjumay in la abuuro page dhab ah oo sida hadda badbaadin bogga nool iyo awood ayna Meta buuxa?
Waxaan u baahan tahay website a sameeyey oo aan doonayo in aan ku daraan shaqeynta this, qof avialable si xigto?
Bogga turjumay waa page dhab ujeeddo kasta wax ku ool ah, Anigu garan maayo waxa aad si sax ah ula jeeddaan ayna Meta buuxa laakiinse sida xaqiiqada ah waxaan rajeynayaa in ay u shaqayso
September 9, 2010 at 11:10 at the
(xumahay aan Ingiriisiga)
Waayo, web dhalaalin i dhigay luqadda Polish in gudasho la'aanta. Marka la beddelo lang in kale, i heli turjumay in this lang widget horyaalka “Translation” iyo fursadaha “Set as Luqadda” iyo “Translation Edit”
tusaale. waayo Deutsh > turjumaad, Samee sidii luqad default
Laakiin marka i bedesho Polish (aan default lang) text this waa in Ingiriisiga, ma dhalaalin. 🙁
Maxaad ka maqan turjumaad widget for defalut lang haddii default waa Ingiriisiga ahayn?
Tani waa la hagaajin doona in version soo socda (0.6.4) ugu dhakhsaha badan
Hello, Waxaan dhibaato ka qabto nb_NO Norwegian. waxqabad ee buddypress uu turjumo oo keliya hawlaha ugu horeysay, dhammaan hawlaha kale sii joogo in Ingiriisiga…Fikradaha kasta?
Waxaan sidoo kale ka heli bogga maran, waayo qaar ka mid ah luqadaha ugu…Waxaan ku siin karaa helitaanka bulshada ee gaarka loo leeyahay haddii aad rabto in aad si loo hubiyo sababta?
Dhab ahaantii waa luqadda in aadan haysan wax files .mo. Baan ka heli bogga maran…
September 22, 2010 at 11:38 at the
Hello, in qaabeynta ciidanka dalwaddii, maamulaha web aan kordhay memory_limit php_admin_value in ay 128 oo hadda u shaqayso… Sidaas aad ahaayeen xaq u, waxa ay ahayd dhibaato xusuusta ah! Mahadsan tihiin tahay caawimada!
September 24, 2010 at 12:53 at the
Bishaareeye Waxaan ahaa awoodaan si ay u caawiyaan
September 24, 2010 at 8:54 at the
Haa, mahadsanidiin mar kale!
Weli waxaan u hesho dhibaato kastoo, marka waxaan haystaa files luqadda buddypress…In Norway tusaale ahaan, keliya waxqabad ugu horeysay lagu turjumay, inta kale ma aha…fikrado wax?